Farqiyada heerarka kala duwan ee doorashooyinka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Waraaqaha codeeynta. Sawirle: Carin Fock
Farqiyada heerarka kala duwan ee doorashooyinka
La daabacay onsdag 3 september 2014 kl 17.15
Doorashooyinka maamullada kala duwan ee dalka ka dhaca afartii sannaba mid ayaa loo codeeyaa saddex maamul oo kala duwan. Waa hoggaanka dalka iyo xubnaha baarlamanka.
Waa maamullada gobollada ama waxa afkan iswiidhishka lagu yiraahdo "landstinget" iyo midda deegaanka. Haddaba siyaasaddaha iyo xulufeeysiga maamulladaa ayaa kala duwan oo mararka qaarkood ey dhacdaa in xisbiyo aanay horay u dhicin iney baarlamanka qaran ku xulufoobaan ey mararka qaarkood ku xulufoobaan heerarka gobol iyo kuwa degmooyinka.
Degmada Kristianstad oo ka mid ah degmooyinka gobolka Skåne ayuu maamulka iminka ka jiraa ey xulufo ku yihiin xisbiyada kala ah: Modarat-ka, Center-ka, Folkpartiet iyo Miljöpartiet. Halka uu xisbiga Kristendemokraterna ka mid yahay xisbiyada mucaaradka sida Socialdemokraterna iyo Vänster partiet.Halka hoggaanka siyaasadda ee qaranku u kala baxdo Midig iyo Bidix ayey dhacdaa in maamullada gobollada iyo degmooyinku yihiin kuwo isku dhafan oo xisbiyo dhanka midig ey awoodda deegmooyinka iyo gobollada ku midoobaan kuwo ka tir-san garabka bidix. Iyada oo kolkaa ruxii u codeeyay mabda' ahaan uu doorashada dabadeed ku waabariisan karo in siyaasaddii uu u codeeyay aanayba ahayn middii uu filayay.
Haddaba iyada oo ay kala qeexan yihiin garabyada ku hardama awoodda maamul baarlaman ee dalka ayaa dhanka kale uu ruuxu ka qaadi karaa jah-wareer inaaney sidaa u kala caddeyn siyaasadda xisbiyada ee maamullada degmooyinka iyo gobollada. Hase yeeshee uu Qalinle Dayib sheegay iney jiraan hab-fikirro kale ee loo codeeyn karo amaba ey dadka qaarkii u maareeyaan su'aalaha noocaasi ah. In tusaale ahaan saddexda cod loo qaybiyo hadba xisbiga lala dhac-san yahay ee heerka doorashooyinka kala duwan.